Madaxweyne Farmaajo oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyay Dalka Sacuudiga -Sawirro
Saturday April 14, 2018 - 17:05:11 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigii uu hoggaaminayey ayaa ka degay Magaalada Dammaam ee dalka Sucuudiga, halkaasoo uu ka furmi doono Shirka 29aad ee Madaxda waddamada ku mideysan ururka Jaamacadda Carabta.
Waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka dayuuradaha Magaalada Damaam amiirka Gobolka Bari ee Sacuudiga Sucuud Bin Naa’if Ibn C/casiis iyo ku xigeenkiisa oo uu wehliyay Xogyaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abuu Gheyd.
Shirka waxaa diiradda lagu saarayaa qadiyadda Falastiin, dagaalka ka dhanka argagixisada iyo xiisadaha ka taagan dalalka Suuriya, Yamen iyo Liibiya, iyadoona madaxda carabtu ay si qoto dheer uga doodi doonaan xal u helista dhibaatooyinka ka jira dalalka xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta.
"Madaxweyne Farmaajo waxa uu khudbad ka jeedin doonaa shirka, isagoona Madaxda kale ee waddamada Carabta la wadaagi doona xaaladaha siyaasadda, ammaanka iyo horumarka ka socda dalka.” Ayuu yiri Agaasimaha Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta shirkan uu socdo waxa uu kulamo la yeelan doona Madaxda qaar ee shirka ka qeybgalaya, iyagoona ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka, iskaashiga iyo danaha guud ee kala dhexeeya dalalkaas Soomaaliya.